आज ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काठमाडौं र ललितपुरका यी ठाउँमा बिजुली जाने « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
आज ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काठमाडौं र ललितपुरका यी ठाउँमा बिजुली जाने
आज काठमाडौं र ललितपुरका धेरैजसो ठाउँमा बिजुली जाने भएको छ । विद्युत क्षमता विस्तार र संरचना सार्नका लागि आज बिजुली आपूर्ति बन्द हुने भएको हो । आज बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बिजुली काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गत बालाजु स्वयम्भू फिडरको चक्रपथ विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय संरचना सार्ने भएकाले बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बिजुली आउने छैन् ।
स्वयम्भू, अजिमा हल, भगवान पाउँ, सानो भर्याङ्ग, ठूलो भर्याङ्ग, इचंङ्गु, हलचोकलगायतका ठाउँहरुमा विद्युत अवरुद्ध हुने भएको छ । त्यस्तै ललितपुरको पुल्चोक वितरण केन्द्रको टेकु पुल्चोक फिडरबाट वितरित ११ केभी लाइनमा नयाँ फिडर विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म धोविघाट नयाँ बाटो, मेघा हस्पिटल, पट्टीपा चोक, सिद्धार्थ कटेज, ढुङ्गेधारालगायतका क्षेत्रहरुका लाइन अवरुद्ध हुने भएको छ ।
बालाजु वितरण केन्द्रको विष्णुमति फिडरअन्तर्गत पर्ने काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १६ को चक्रपथ क्षेत्रमा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म वनस्थली, गंगाहल, माछापोखरी, बालाजु वाइपास, वसन्तनगर, न्यायीक प्रतिष्ठान, मनमैजु, लोकतान्त्रिक चोक, इन्द्रायणी पुललगायतका क्षेत्रहरुमा लाइन अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विद्युत् मर्मतका लागि भन्दै शुक्रबार पनि विभिन्न ठाउँमा बिजुली काटिएको थियो ।
यस्तै आज पनि देशका केही ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए । बेलुका प्रदेश नम्बर एक र ५ सहित गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका केही ठाउँमा पनि वर्षा हुने उनले बताए । आज देशका धेरैजसो ठाउँको मौसम आंशिक बद्ली हुने अनुमान छ ।
आज केहीबेर घाम लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यस्तै राति भने केही ठाउँमा मेघगर्जन हुने अनुमान छ । मनसुनको समय भए पनि खासै सक्रिय नरहेकाले लगातार ठूलो वर्षा भने नहुने मौसमविद् वरुण पौडेलले बताए ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७७ शनिबार ११ : ०६ बजे
कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमै छैन भरपर्दो फोन र इन्टरनेट
तपाई मोटो हुनुभयो ? तौल घटाउन यी खानेकुरा खानुहोस् !
एनआरएनएले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दियो १२ लाख ८७ हजार